Guddiga Farsamada Galmudug oo ku dhawaaqay in ay bilaabayaan Xaraynta Odayaasha Dhaqanka. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Guddiga Farsamada Galmudug oo ku dhawaaqay in ay bilaabayaan Xaraynta Odayaasha Dhaqanka.
Guddiga Farsamada Galmudug oo ku dhawaaqay in ay bilaabayaan Xaraynta Odayaasha Dhaqanka.
Dhuusamareeb (Caasimadatimes)-Guddoomiyaha iyo Xubnaha kale ee guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa maanta kormeeray Xarunta Shiirkole ee la dejinayo odayaasha Galmudug si loo billaabo soo xulidda xildhibaannada baarlamaanka labaad ee Galmudug.
Previous articleSafiirka Sweden ee Soomaaliya oo gaaray Garowe.Muxuuse uu ka dooney Garowe?
Next articleDEG DEG: Garowe oo caawa ololaysaa dagaalka ka socda Xarunta baarlamanka Puntland & Weerarka lagu qaaday.
Xog: Dilkii Saciid Adoon oo qarka u saaran iney ku kala...
Xasan Sheekh oo Baasiin ku sii shubey Xayiraadi maanta lagu sameeyey...